ဘာဗိုင်းရပ်စ်လဲ — MYSTERY ZILLION
ကျွန်တော့ဆိုင်ကစက်မှာ ကွန်ပျူတာဖွင့်ရင် task manager ကလွဲပြီးဘာမှဖွင့်လို့မရပါ။
start menu bar လည်းမပေါ်ပါ ။ desktop လည်းမပေါ်ပါ ။
ဒါ့အပြင် task manager ကနေ msconfig ခေါ်ပြီး startup ထဲ၀င်ကြည့်တော့ မသင်္ကာတာဘာမှ
မတွေ့ပါ။ ၁ မိနစ်ကြာတဲ့အချိန် ဒါမှမဟုတ် task manager မှ new task ကတဆင့် explorer
ဖွင့်တော့ shutdown timer ပေါ်လာပါတယ် တစ်မိနစ် countdown ပါ။ shutdown abort လုပ်လို့ရပါတယ်။ system restore လုပ်လို့မရပါ။ ကျန်တာအကုန်လုံးကို task manager မှ new task ကတဆင့် အကုန်အလုပ်လုပ်ပါတယ် start menu bar နှင့် desktop ကတော့မပေါ်ပါ။
ုantivirus အားလုံးပိတ်ထားပြီထင်တယ် ။ ခြေရာလက်ရာမချန်ခဲ့ပါ။
windows registry ထဲမှ system အချို့ကိုသာ ၀င်ဖျက်သွားတဲ့ exe တခုခုကို user က run မိတယ်ထင်တယ် ဗိုင်းရပ်စ်တော့မဟုတ်လောက်ဘူးထင်တယ်။
ကျွန်တော်က acronics နှင့် ကွန်ပျူတာအားလုံးကို clone partition လုပ်ထားတော့ ပြင်လို့လွယ်တယ် ဒါပေမယ့်စမ်းသပ်ချင်သေးလို့။ ဒီအတိုင်းထားထားတယ်။ ဟီးဟီး
အပြစ်ရှာလိုက်ဦးမယ် စမ်းချင်သူများအတွက် ပို့ပေးရအောင်လည်း virus ဖိုင်လည်းရှာလို့မတွေ့ဘူး
stick ထဲလည်းမ၀င်ဘူး။ system file ဖော်ထားလည်း မသင်္ကာတာမတွေ့ဘူး task manager မှာလည်း မသင်္ကာတဲ့ process မတွေ့ပါ။ network မှာလည်းမကူးပါ။ ကြုံဘူးကြလားမသိဘူး
နောက်ဆုံး window system ဖိုင်ပျက်တယ်လို့ပဲယူဆရတော့မယ်ထင်တယ်
တွေ့တော့ တွေ့ဘူးတယ် ကျနော်တော့ ............ဒါပေမဲ့ မဖြေရှင်းတတ်ခဲ့ဘူး သူက desktop ကို ဘာမှ မမြင်ရဘူး taskmanager ပဲ ခေါ်ရတယ် အင်တာနက်ကြည့်လို့ ၇တယ် အဲ့ဒါအဖြေလိုက်ရှာရင်း နဲ့ပဲ အသစ်တင်လိုက်ရတယ် .. အဲ့ဒီစက်က နက်၀ါ့ က ခပ်ကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားတယ် သူ့ဘာသာပျက်ချင်လို့ဖြစ်တာလား အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်လားတော့သိဘူး တွေ့ဘူးတာ တူမယ်ထင်လို့ ပြောကြည့်တာ... :6::6:
* Scan memory.
* Scan system, high risk location.
* Detect malware from file Autorun.inf.
* Repair registry changed by malware.
* вЂњKill All ProcessвЂќ function except windows (to delete suspicious malware)
* Online virus definition.
The function of вЂњRepair RegistryвЂќ:
* Normalize вЂњTaskbar Size MoveвЂќ
* Normalize internet explorer (Title bar, General Tab dll)
* Normalize .reg, .exe, .pif, dan .com.
* Normalize mouse right click.
ဒီကောင်လေးနဲ ့စမ်းကြည့်ပါအုံး ကျွန်တော်လည်းအခုမှတွေ ့တာ မစမ်းရသေးဘူး
nod32 ကျေးဇူးကြောင့် virus ကိုမကိုက်သေးဘူး nod32 ရယ် HD guard ရယ် autorunkiller ရယ် usbdisk security ရယ်သုံးထားတာ ဘာကောင်မှာကိုက်သေးဘူး
အွန်လိုင်း protection ကိုတော့ disable ပေးထားတယ်
အကောင်မဟုတ်လို့ပြစရာကိုမရှိတာပါ။ ကွန်ပျူတာက desktop လည်းမပေါ်ပါ။ start menu bar လည်းမပေါ်ပါ။ ကွန်ပျူတာ log on ဖြစ်တာနဲ့ တင်ထားတဲ့ desktop background ပဲပေါ်ပါတယ်။ကွန်ပျူတာတခုလုံးပြောင်ရှင်းနေတာပဲ။
မောက်စ်နှိပ်စရာဘာမှမပေါ်ပါ။ keyboard မှာလည်း ctrl+Alt+delete တမျိုးပဲရပါတော့တယ်။ window+E explorer လည်းမရပါ။ new Task မှသာသွားလို့ရပါတယ်။ New Task ကနေဆိုအကုန်သုံးလို့ရပါတယ်။ New Task က explorer သွားမှ mouse နှိပ်စရာရှိပါတော့တယ်။
ဖိုင်တစ်ဖိုင်တော့ မင်္သကာတာတွေ့တယ် NewFolder.exe ဆိုတော့ နောက်ကောင်းတဲ့စက်မှာတော့မစမ်းရဲသေးဘူး
Task Manager ကိုခေါ်လို့ရတယ်မဟုတ်လား ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး မပေါ်ဘူးဆိုတာ explorer file ကိုကိုက်သွားလို့ဖြစ်တာ Task Manager ကိုခေါ်ပြီ New Task မှာ explorer.exe ပြန်ဖွင့်ပြီးစမ်းကြည့်လိုက်ပါ။
လိုရင် [email protected] ကိုဆက်သွယ်ကြည့်ပါ ကျွန်တော်တတ်နိုင်သလောက်တော့ကုူညီပါ့မယ်။
my computer ကောဖွင့်လို ့ရလား ရရင်
mycomputer ပုံကော ပေါ်သေးလား ကွန်ပြူတာပုံလေးမဟုတ်တော့ရင်တော့ explore.exe
ဟုတ်တယ်ဗျ ကျနော့် စက်တွေ မှာလည်း ဖြစ်ကုန်တယ် ကျနော်လိုက်ကြည့်လိုက်တယ်ဗျာ အဲမှာ အော်တိုရမ်းတစ်ခု တော့ တွေ့တယ်
အားလုံး disable တွေ ဖြစ်ကုန်ပါတယ် ဗျ ...
အဲဒါတွေ ဖြစ်ကုန်တယ်ဗျ .. antivirus ကတော့ ကျနော် က avast 4.0 ကို တင်ထားမိပါတယ်
အခုတော့ kasper ပြောင်းသုံးကြည့်ပါတယ် မရပါ...
အခြား drive ထဲမှာများ ပုံးနေလား တော့ မသိပါ ကျနော် windows ပြန်တင်လိုက်ရပါတယ် .. ၄ လုံးလောက်တော့ ချန်ထားပါတယ် စမ်းခြင်လို့ ပါ .. အဲဒါလေး သတ်လို့ ရမယ်ဆိုရင်တော့ .. ကူညီပေးကြပါဗျာ...
shared folder disable
net view loss
local net work တွေလည်း ပြုတ်ကုန်ပါ ပါတယ်
အရင် windows က folder တွေ လည်း access denied ဖြစ်ကုန်ပါတယ် ...
program တစ်ခု ရမ်းလိုက်ရင်လည်း brother တို့ ပြောသလို runonce. ပေါ်လိုက် rundll32 ပေါ်လိုက် error တွေ တက်ပါတယ် ဗျ
ရောဂါကိုတင်ပြတာပါ ခင်ဗျ... (:(( rrt လည်း run လို့ မရပါခင်ဗျ ...
ကူညီကြပါဦးဗျို့.... ညီနောင်တို့ ရေ...
ဆိုပြီးတော့ လည်း audio driver ပျောက်သွားတယ် .. အသံမကြားရတော့ ဘူး ဗျို့ ...
နောက် local network လည်း မရတော့ဘူး အဲဒါဗိုင်းရပ်လား ... လို့ သိချင်ပါတယ်ဗျာ...
ဖြေပေးကြပါဦး မော်မော် တို့ မင်မင် တို့ ခင်ဗျား................
pc ကို restart ပြန်လုပ်လိုက်ရင်တော့ sound က ပြန်ရပါတယ် ဒါပေမဲ့ လည်း အဲလိုကြီးက ဖြေရှင်းနည်း မဟုတ်သလိုပဲ နော် ဖြေပေးကြပါဦးဗျာ... အပေါ်က ကျနော်ပေးထားတဲ့ ဗိုင်းရပ်ကြောင့် များလား ...ဘယ် ဆော့၀ဲလ် သုံးရမလည်း ဗျ... (:((:77::77: